Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Dalxiisayaasha Hawaii: Waxaan rabnaa inaan kaa yara aragno
Waxaa soo saaray dadka deggan Oahu, oo ay iskaashanayaan Magaalada iyo Degmada Honolulu iyo Xafiiska Booqdayaasha Oahu (OVB), Qorshaha Waxqabadka Maaraynta Maaraynta ee Oahu (DMAP) waxay tilmaamaysaa aagagga baahida iyo sidoo kale xalka kor loogu qaadayo tayada dadka deegaanka nolosha iyo hagaajinta waayo -aragnimada booqdaha. Tirada shayga koowaad ee qorshaha ayaa ah in la yareeyo tirada guud ee booqdayaasha. Dalxiisku waa darawalka ugu weyn dhaqaalaha Hawaii wuxuuna isku fidiyaa warshadaha kale sida adeegga, gaadiidka, iyo tafaariiqda.
Jawaab -celinta bulshada ayaa la soo ururiyey intii lagu jiray laba bandhig oo dalwadnimo ah iyo sidoo kale foomka gelinta internetka.
Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii (HTA) ayaa daabacday 2021-2024 DMAP, hagaha dib-u-dhiska, dib-u-qeexidda iyo dib-u-dejinta jihada dalxiiska ee Oahu.
Qorshaha ku salaysan bulshada ayaa qayb ka ah shaqada HTA ee ku wajahan Malama Kuu Home (daryeelida gurigayga aan jeclahay) iyo dadaalkeeda dardargelinta leh ee socda si loo maareeyo dalxiiska hab dib u soo noolayn ah.
"Waxaan u mahadcelineynaa dadka deggan Oahu ee ka qeybqaatay geeddi-socodka DMAP oo si xamaasad leh uga qeyb qaatay aragtidooda kala duwan, waxay ka wada hadleen caqabado kala duwan oo la xiriira dalxiiska ee xaafaddooda waxayna gacan ka geysteen dejinta qorshe wax-qabad oo lagama maarmaan u ah wanaagga bulshada," ayuu yiri John De Fries , Madaxweynaha HTA iyo agaasimaha guud. "Waxay ku saabsan tahay wadashaqayn joogto ah iyo in si wada jir ah loogu socdo malamaha meeshan la jecel yahay iyo midba midka kale, sida ay rabaan dadka reer Oahu."
DMAP waxay diiradda saareysaa tallaabooyinka muhiimka ah ee bulshada, warshadaha soo-booqdaha iyo qaybaha kale ay lagama maarmaan u yihiin muddo saddex sano ah. Aasaaska Oahu DMAP wuxuu ku salaysan yahay Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee HTA ee 2020-2025, iyo ficilladu waxay ku salaysan yihiin afarta tiir ee is -dhexgalka - Khayraadka Dabiiciga ah, Dhaqanka Hawaii, Suuqgeynta Bulshada iyo Calaamadaha.
“Oahu waa meel gaar ah wuxuuna ka soo jeedaa meel kasta oo adduunka ah iyada oo ay ugu wacan tahay quruxdeeda dabiiciga ah iyo dadkeeda cajiibka ah. Anagoo u wada shaqaynayna bulsho ahaan si aan u daryeelno kheyraadkeena, waxaan abuurnaa jawi ay dhaqankeenna, dhulkeenna iyo biyaheennu, dhaqaalaheenna, iyo xiriirkeennu ku kobci karaan, ”ayuu yiri Duqa Rick Blangiardi.
Wuxuu sii watay, “La shaqaynta Hay'adda Dalxiiska Hawaii ee Qorshaha Waxqabadka Maaraynta Maaraynta ee Oahu, Magaalada iyo Degmada Honolulu waxay diiradda saari doontaa saddex ahmiyadood oo ku salaysan bulshada: Ilaali goobaheena ugu caansan oo maaree khibradda qof kasta oo soo booqda, xaddid gaaban -kiraynta muddada-dheer ee aagagga soonaha ah, iyo kordhinta adeegsiga ikhtiyaarada gaadiidka ee la xiriira booqdaha. ”
Tallaabooyinka soo socda waxaa soo saaray guddiga hagitaanka Oahu, oo ka kooban deganeyaal matala bulshooyinka ay ku nool yihiin, iyo sidoo kale warshadaha booqdaha, waaxyo ganacsi oo kala duwan, iyo ururo aan macaash doon ahayn, oo bulshada wax ku biirinaya. Wakiilo ka socda Magaalada iyo Degmada Honolulu, HTA iyo OVB ayaa iyaguna talooyin siiyay intii hawsha socotay.
In la yareeyo tirada guud ee booqdayaasha Oahu oo la gaarsiin karo heer la maareyn karo iyada oo la xakameynayo tirada hoyga booqdaha iyo sahaminta isbeddelada ku aaddan isticmaalka dhulka, soonaha iyo siyaasadaha garoonka.
In la hirgeliyo barnaamijka isgaarsiinta dalxiiska ee imaatinka ka hor iyo imaatinka si loo dhiirrigeliyo habdhaqan ixtiraam iyo taageero leh.
Aqoonso goobo iyo hirgalinta qorshayaasha wakiilnimada meelaha muhiimka ah ee Oahu.
Kordhinta fulinta iyo maareynta firfircoon ee goobaha iyo raadadka.
Samee nidaam boos celin si loola socdo loona maamulo dadka isticmaala khayraadka dabiiciga ah iyo goobaha dhaqanka.
Samee “Kharashka Dalxiiska Dib -u -Soo -nooleynta” kaas oo si toos ah u taageera barnaamijyada dib -u -soo -nooleynta kheyraadka Hawaii, ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah, iyo wax ka qabashada deymaha ilaalinta ee aan la bixin.
Samee oo hirgeli barnaamijyada suuq-geynta si loo soo jiito socotada saamaynta togan leh oo mudnaanta siiya bay'ada, dhaqanka iyo maal-gelinta bulshada deegaankeenna.
Sii wad horumarinta iyo hirgelinta barnaamijyada “Iibso Degmo” si kor loogu qaado iibinta badeecadaha iyo adeegyada maxalliga ah si dhaqaalaha loogu hayo bulshooyinkayaga loona yareeyo raadadka kaarboonka.
Maaree isticmaalka baabuurta ee booqdayaasha sida gaadiidka Oahu.
La shaqee jaalliyadaha bulshada si loo horumariyo, suuq geliyo, loo dhiirri -geliyo, loona taageero waayo -aragnimo wadashaqayn oo badan, oo kobcisa dadka deggan iyo booqdayaashaba.
Oktoobar 21, 2021 at 01: 36
شات العراق شات عراقنا شات عراقي دردشة